Himalaya Dainik » म ठुली भैसके.,पोइला गए नि मलाई लिन आउनुस आमा..,बेसहारा पूजा रुदै मिडियामा !
१० भाद्र २०७६ |
म ठुली भैसके.,पोइला गए नि मलाई लिन आउनुस आमा..,बेसहारा पूजा रुदै मिडियामा !
आफु अपाङ्ग भएर पनि आफु जस्तै अपाङ्गहरुलाई नया जीवन दिदै छन् दोलखा जिरीका चन्द्र बहादुर खत्री । उनले काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका -६ मा अपाङ्ग सेवा केन्द्र संचालन गर्दै आएका छन् । उक्त केन्द्रमा अहिले २० जना अपाङ्गहरु छन् ।
५ कक्षा देखि नै पढाई छोडेका खत्रीले २०७० सालमा अपाङ्ग सेवा केन्द्रको स्थापना गरेका हुन् । उनि काठमाडौँ छिरेपछि धेरै संघ सस्था बसेर आफुले सिप सिकेको र अहिले तेही सिप अरुलाई सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने सोचमा उक्त सेवा केन्द्र खोलेको बताउछन ।
सानै उमेर देखि अचानक आफ्नो कम्मर भन्दा मुनिको भाग नचल्ने भएपछी उनि अपाङ्ग भएको बताए । श्रीमती लक्ष्मी जिरेल पनि अपाङ्ग हरुकै सेवामा लागेका छन् । उनीहरुका दुई सन्तान छन । श्रीमानसंगै अरुको सेवा गर्न पाउदा एकदम खुशी र गर्व लाग्ने श्रीमती जिरेलले बताईन ।
यसै सेवा केन्द्रमा हामीले अन्दाजी १५ वर्षकि पुजा परियारसंग कुरा गरेका थियौ । उनको कथा सुनेर जो कोहीको आखामा आशु आउछ । उनलाई सानैमा आमाले छोडेर अर्कैसंग पोइला गएपछी बाबुले पनि छोडेको र पुजाको हजुर आमा बताउने एक जना बृद्धले सेवा केन्द्रमा ल्याएको जिरेलले बताईन । उनि अहिले सेवा केन्द्रमै तालिम सिकेर आत्मा निर्भर भएकी छिन ।
आफुलाई सानैमा आमा बुवाले छोडेर गए पछी आमा बुवाको माया पाउन नसकेको पुजा बताउछिन । आफुलाई पढ्ने इच्छा भएको बताउने पूजाले सबै सामु पढाई दिन आग्रह समेत गरेकी छिन ।
प्रकाशित मिति १० भाद्र २०७६, मंगलवार ०३:२३